Dad loo maxkamadeynayo inay nolosha ku gubeen gabar ka cabatay faroxumeynta macallinka dugsiga - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka family handout
Image caption Nusrat waxaa la gubay iyadoo nool
16 ruux ayaa lasoo taagay maxkamad ku taalla waddanka Bangladesh, iyagoo loo heysto dilkii argagaxa lahaa ee loo geystay gabar da' yar, taasoo iyadoo nool la gubay markii ay shaaca ka qaadday fal faroxumeyn ah oo uu u geystay macallinkii dugsigeeda.
Nusrat Jahan Rafi, oo 19 jir ahayd ayaa lagu shubay gaas ka dibna dab la qabadsiiyay 6-dii bishii Abriil, xilli ay ku sugneyd saqafka kore ee dhismaha uu ku yaallay dugsiga.
Dilkeeda ayaa yimid maalmo kar kadib markii ay booliska uga dacwootay tacaddiga uu kula kacay maamulihii madarasada Islaamiga ah.
Dadka la maxkamadeynayo waxaa ka mid ah maamulaha qudhiisa oo lagu magacaabo Siraj Ud Doula.
Booliska ayaa sheegay in dilka gabadha uu amar ku bixiyay isagoo xabsiga ku jira, ka dib markii ay diidday inay ka noqoto dacwaddii ay macallinka ka gudbisay.
Waxay diyaarinta dilkaas ku qeexeen mid la mid ah "qorsheyaasha milatariga".
Kiiskan ayaa kiciyay dibadbaxyo waaweyn oo ka dhacay Bangaldesh, waxaana uu toosh ku ifiyay dhibbaneyaasha aan laga warqabin ee dalkaas loogu geysto tacaddiyada la xiriira galmada..
Image caption Waxaa la sameeyay mudaharaadyo lagu dalbanayay in gabadhaas ay caddaalad hesho
Nusrat ayaa dacwad ka gudbisay Mr Doula dabayaaqadii bishii Maarso, kaddibna booliska ayaa xabsiga u taxaabay eedeysanaha.
Sidan ayey u dhacday sheekadeeda
Gabdha la dilay waxay kasoo jeedday magaalada Feni oo qiyaastii 160km dhinaca koonfureed kaga began caasimadda Dhaka.
Image caption Dibadbaxyo looga soo horjeedo tacaddiyada gabdhaha ayaa ka dhacay Bangladesh
Lahaanshaha sawirka SHAHADAT HOSSAIN
Image caption Nusrat walaakeed oo barooranaya
Image caption Aaska Nusrat waxaa ka qeyb galay kumannaan ruux
Booliska ayaa ilaa xiray dhowr iyo toban ruux, kuwaasoo 7 ka mid ah lagu eedeeyay inay dilkeeda ka qeyb qaateen.
Image caption Qoyska gabadhan ayaa aad u murugooday
Geerida Nusrat waxay abuurtay xiisad weyn, kumannaan ruux ayaana baraha bulshada ku muujiyay caradooda ku aaddan sida loola dhaqmo gabdhaha dhibaneyaasha u ah tacaddiyada galmada ee ka dhaca dalka Bangladesh.